အရိုးလိုဖြူဖွေးနေတဲ့တိမ်ဖြူဖြူတွေကောင်းကင်မှာပေါလောမျောနေတာကို ကြည့်ရင်းမှတ်ဥာဏ်တစ်စုံတစ်ရာ က သင့်ကို နာကျင် ကိုက်ခဲနေစေပါသလား။ ညသန်းခေါင်ယံကခွေးအူသံဟာသင့်အတွက်ပြန်အမှတ်မရလိုသော လွမ်းဆွတ်ဖွယ် မှတ်ဥာဏ်ကို ပြန်လည် တူးဆွနေပါသလား။ ထွက်ခွာသွားတဲ့ရထား၊ပျံသွားတဲ့လေယာဉ်ပျံတို.ကို ကြည့်ရင်းမျက်ရည်စများသင့်မျက်ဝန်း မှာ တွဲလွဲခိုလာတာကိုသင်မနှစ်သက်နေပါသလား။ မိုက်မဲမှုကြောင့် ဖြစ်ခဲ့တဲ့ မှတ်ဥာဏ်ကိုသင် လုံးဝ မေ့ပျောက်ချင်နေမှာပါ။ ဘယ်လိုမေ့ပျောက်ရနိုင်လဲဆိုတာကိုသင်သိလိုပါသလား။ အရှက်ရဖွယ်စော်ကားခံခဲ့ရတဲ့ မှတ်ဥာဏ်ဟာသင့်ကိုတနုံ.နုံ. နာကျင် နေတာကိုအမြစ်ပြတ်ပျောက်စေလိုနေပါသလား။ စတဲ့ စတဲ့ မလိုလားအပ်တဲ့ မှတ်ဥာဏ်တွေကိုထိန်းသိမ်းပေးနိုင်တဲ့ နေရာတစ်ခု ရှိပါတယ်။ သင့်အတွက် အသုံးဝင်မယ်ဆိုရင် ကြိုဆိုနေမှာပါ။
ကော်ဖီဆိုင်နဲ.ကပ်လျက် လမ်းထောင့်မှာမှတ်ဥာဏ်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင် ရှိတယ်။ အဲဒီဆိုင်ဟာဒီရပ်ကွက်ထဲမှာတော့ လူအလာ အများဆုံးနဲ. အအောင်မြင်ဆုံးဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖြစ်လို.နေတယ်။ အခြားဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေဟာအဲဒီလိုဆိုင်တစ်ဆိုင် အပြိုင်လိုက်ဖွင့်ချင် ပေမယ့် နည်းစနစ်နဲ. အတတ်ပညာကိုဘယ်မှာသွားရှာဖွေရမှန်းမသိတာကြောင့် လက်လျှော့နေကြရတယ်။ မှတ်ဥာဏ်ဆိုင်ကို သွားရောက်ဖူးသူတွေကိုမေးကြည့်တော့ အားလုံးက နှစ်သက်ကြကြောင်းကိုတစ်ခဲနက်ထောက်ခံတာကိုသူတို. အံ့အားသင့်ဖွယ် သိလိုက်ကြတယ်။
“ကျွန်မကတော့ အရင်ကနဲ. လုံးဝမတူတော့ဘူး။ ပေါ့ပါးလန်းဆန်းလို. နေလို.ထိုင်လို.ကောင်းနေပြီ။ ကျွန်မ အဲဒီမှာသွားထား လိုက်တဲ့ မှတ်ဥာဏ်ဟာဘာလဲဆိုတာတောင် ကျွန်မမမှတ်မိတော့ပါဘူး။ မှတ်မိဖို.လည်းမလိုတော့ဘူးလေ။ ကျွန်မလက်ရှိ အနေအထားကိုပဲသဘောကျပါတယ်။ ဒီလိုဆိုင်မျိုးတွေ လူ.အဖွဲ.အစည်းအတွက် လိုအပ်ပါတယ်” အသက် ၃၀ကျော် အရွယ် အိမ်ရှင်မတစ်ဦးကတော့ မှတ်ဥာဏ်ဆိုင်နဲ. ပက်သက်လို. အထက်ပါအတိုင်းမှတ်ချက်ပြုပါတယ်။
သူမလိုမျိုးနောက်ထပ် အကောင်းပြောသူတစ်ဦးကအသက် ၄၀ နီးပါးအရွယ်ရှိရပ်ကွက်ထဲကခပ်ဆိုးဆိုးလူတစ်ယောက် ပါပဲ။ “ကျွန်တော့်ဘ၀ အသစ်ကပြန်စလိုက်ရသလိုပါပဲ။ အရင်ကလိုဆိုးသွမ်းတာတွေ၊ပြသနာရှာတာတွေ မရှိတော့ပါဘူး။ ကျွန်တော် မလိုချင်တဲ့ မှတ်ဥာဏ်မရှိတဲ့နောက် အဲဒီလို ပြသနာဖြစ်ချင်စိတ်လည်း ကျွန်တော့်မှာမရှိတော့ဘူး။ ကျွန်တော်ဟာလူကောင်း တစ်ယောက်အဖြစ်ကို နှစ်သက်နေပါပြီ။ အဲဒီအတွက် မှတ်ဥာဏ်ဆိုင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်”
မှတ်ဥာဏ်ဆိုင်နဲ. ပက်သက်လို. မီဒီယာတွေဟာ စိတ်ဝင်တစားရေးသားဖို. ကြိုးစားကြပေမယ့် ဘယ်သူမှ ခရေစေ့တွင်းကျ မသိနိုင်သလိုဆိုင်ရှင်(သို.မဟုတ်) မန်နေဂျာဆိုသူကိုလည်းအသေးစိတ် မေးမြန်းခွင့်မရနိုင်ကြဘူး။ အပြင်ပန်းကမြင်ရတာတွေ၊ သွားခဲ့ဖူးသူတွေနဲ. ကိုယ်တိုင်သွားခဲ့တဲ့ အတွေ.အကြုံတွေပေါ်ကိုပဲအခြေခံရေးသားဖော်ပြကြတယ်။ နာမည်ကြီးသတင်းစာ တစ်စောင်မှာဆောင်းပါးရှင် တစ်ယောက်ကခုလိုရေးသားဖော်ပြပါတယ်။ “ဆိုင်ထဲကို ၀င်ခွင့်ရဖို. ခြောက်နာရီလောက်တန်းစီ ရပါတယ်။ မနက် ၄နာရီလောက်ကတည်း သွားတန်းစီရတာပါ။ ဆိုင်က ၉နာရီဖွင့်မှာ ဖြစ်ပေမယ့် ကျွန်တော် ရောက်သွားချိန်မှာ ကျွန်တော့်ရှေ.မှာလူ နှစ်ဆယ်လောက်ကြိုရောက်နှင့်နေပါပြီ။ တန်းစီနေချိန်ကာလတစ်လျှောက်လုံး ကျွန်တော့်ရှေ.ကလူနဲ. နောက်ကလူကို ကျွန်တော် စကားပြောကြည့်ဖို.ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် သူတို.ရဲ. အာရုံစူးစိုက်မှုပျက်သွားမှာစိုးလို. ကျွန်တော်နဲ. စကားမပြောချင်ကြဘူးလို.ဆိုပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာမှတ်ဥာဏ်လာရောက်အပ်နှံသူတစ်ယောက်အနေနဲ. အထဲကို ၀င်ရမှာ ဖြစ်တာကြောင့် ကျွန်တော့် ဘ၀ထဲက ဘယ်မှတ်ဥာဏ်ကိုသွားရောက်အပ်နှံရင်ကောင်းမလဲဆိုတာကို စောင့်ဆိုင်းနေရင်း စဉ်းစားရပါတယ်။ သူများတွေကမပျော်မရွှင်ဖြစ်ရတဲ့၊ နာကျင်ရတဲ့မှတ်ဥာဏ်ကိုအပြီးအပိုင်အပ်နှံဖို. လာကြချိန်မှာ ကျွန်တော်ကပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့မှတ်ဥာဏ်တစ်ခုကိုအပ်နှံလိုက်ရင် ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာသိချင်မိတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော့် အလှည့်ရောက်မယ့်အချိန်မှာပျော်စရာမှတ်ဥာဏ်ကိုအပ်နှံဖို. တစ်ခုကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော်တော်တော်လေးစဉ်းစားလိုက်ရပါတယ်။ နောက်တော့ ကျွန်တော် အပ်နှံရမယ့် မှတ်ဥာဏ်ကိုရခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ. ကျွန်တော် အထဲကို ၀င်ခွင့်ရလာခဲ့တယ်။ အချိန်ကတော့ မနက် ၁၁ နာရီကျော်နေပြီ။ မည်သည့် ကင်မရာ၊ မည်သည့် အီလက်ထရောနစ် ပစ္စည်းမျိုးကိုမှ ဆိုင်အတွင်းသယ်ဆောင်ခွင့်မပြုပါလို. ဆိုင်ဝမှာ ဆိုင်းဘုတ်ကပ်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော်က စူးစမ်းလိုသူတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် ကျွန်တော့်မျက်မှန်မှာ လျှို.၀ှက်ကင်မရာသေးသေးလေးတပ်ဆင်ပြီလားခဲ့ပါတယ်။ ဆိုင်ဝကို ၀င်ချိန်မှာပဲ တတီတီအသံမြည်လာပြီးမိတ်ဆွေရဲ. အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းကိုဘေးကခုံပေါ်မှာထားခဲ့ရန် မေတ္တာ ရပ်ခံပါတယ် ဆိုတဲ့ အသံဟာဆောင်းဘောက်စ်တစ်ခုကနေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါနဲ. ကျွန်တော် မျက်မှန်ကို ချွတ်ပြီးခုံပေါ် တင်ခဲ့ရတယ်။ ဒီတစ်ကြိမ်ကိုလူတစ်ယောက်သာ ၀င်ခွင့်ရတာကြောင့် ကျွန်တော် တစ်ယောက်ထဲ ၀င်လာခဲ့ရတယ်။ မျက်မှန် ချွတ်ခဲ့ရတာကြောင့် ကျွန်တော် ကောင်းကောင်းမမြင်ရဘူး။ သွားလို.၊လာလို.တော့ရတာပေါ့။ အခန်းထဲမှာမီးထိန်ထိန်တော့ လင်းနေတယ်။ဧည့်ကြိုကောင်တာရောက်တော့ မျက်နှာချွန်ချွန်နဲ.လူတစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ကိုထိုင်ခိုင်းပြီးအပ်နှံလိုသည့် အကြောင်းအရာဖောင်ကိုဖြည့်ခိုင်းပါတယ်။ ကျွန်တော် စာရေးနိုင်ဖို. မျက်မှန်တစ်လက်ကိုသူထုတ်ပေးလို. သူ.မျက်နှာကို ကျွန်တော်မြင်ရတာပါ။ သူပေးတဲ့ ဘောလ်ပင်နဲ. စာရွက်ကိုယူပြီး ဖြည့်ရမယ့် ဖောင်မှာ ကျွန်တော် ရေးလိုက်တယ်။ ကျွန်တော့် မှတ်ဥာဏ်ကတော့ ပျော်ရွှင်စရာမှတ်ဥာဏ်ပါ။ ကျွန်တော့် ချစ်သူနဲ. ကျွန်တော့်ရဲ. ပထမဆုံးအနမ်းအကြောင်းရေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်နဲ. ကျွန်တော့် ချစ်သူဟာခုဆိုသား၊သမီးနှစ်ယောက်နဲ. ပျော်ရွှင်စရာ ဘ၀ကို ရရှိနေပြီဖြစ်တာကြောင့် ပထမဆုံးအနမ်းကို မေ့သွားသည့်တိုင် ပြသနာမရှိနိုင်ဘူးလို. ယူဆမိလို.ပါ။ ကျွန်တော့် စာရွက်ကိုသူကြည့်ပြီးတဲ့နောက် “ခင်ဗျားရဲ.ပျော်ရွှင်နေတဲ့ ဘ၀လေး မပျက်စီးချင်ရင် ဒီကနေပြန်ထွက်သွားပါတော့” လို. သူကကျွန်တော့်ကိုချက်ချင်းပြန်ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော် ဘာမှ ပြန်မပြောနိုင်ခင် သူကမျက်မှန်ချွတ်ပြီးအမြန်ထွက်သွားပါလို.ပြောတယ်။ ကျွန်တော်လည်းရတဲ့ အချိန်တိုလေးအတွင်းဘးဘီကို ၀ဲကြည့်မိပါတယ်။ ဆိုင်ထဲမှာသူတစ်ယောက်ပဲရှိပါတယ်။ သူ.ရဲ.ကောင်တာနောက်မှာ ရုပ်ရှင်ရုံဝင်ပေါက်လို အမှောင်ချထားတဲ့ တံခါးပေါက်ကြီးနဲ. လိုက်ကာကြီးတွေကိုမြင်ရပါတယ်။ သူကမြန်မြန်လို.ပြောတော့ ကျွန်တော် ဆိုင်ထဲကနေပြန်ထွက်ခွာလာရတယ်။ အ၀မှာ ကျွန်တော့်မျက်မှန်ကို ပြန်တပ်ပြီးအထဲကိုတစ်ချက်ပြန်လှည့်ကြည့်တော့ မီးမှောင်လို.သွားပါတယ်။ ကျွန်တော် ဆိုင်ထဲက ထွက်တာနဲ. ကျွန်တော့် နောက်ကလူဟာဆိုင်ထဲကိုအလျင်အမြန် ၀င်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ ကျွန်တော့်အတွက် တော့မအောင်မြင် ခဲ့တဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုပါပဲ”
အခြားသောသတင်းစာတွေကလည်းအမျိုးမျိုးရေးသားကြပါတယ်။ တစ်ချို.က ဒါဟာစိတ်ညှို.ကုထုံးဖြစ်နိုင်တယ်လို. သုံးသပ်ကြ သလို၊ တစ်ချို.ကလည်းဒါဟာလူတွေကိုလှည့်စားဖို. စနစ်တကျ ပြင်ဆင်ထားတဲ့နေရာတစ်ခုလို. ရေးကြပါတယ်။ အ၀ါရောင် သတင်းစာတစ်စောင်ကတော့ ဂြိုလ်သားတွေဟာတစ်ဖက်လှည့်နဲ. လူတွေကိုစမ်းသပ်ဖို.ရောက်လာတာလို. ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဘာကိုမှ မမေ့ပစ်ပဲဘာကိုမှ သတိမရတဲ့ လူဟာမှတ်ဥာဏ်ကောင်းတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။
မှတ်ဥာဏ်ဆိုင်နဲ. ပက်သက်လို.အထက်ကဆောင်းပါးရှင်ကဲ့သို. အဆင်မပြေကြသူများလည်းရှိကြပါတယ်။
ခါးကုန်းနေတဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာမှတ်ဥာဏ်ဆိုင်ကိုသွားပြီးသူခါးကုန်းနေရတဲ့ အဖြစ်ကိုမေ့ပျောက်နိုင်ဖို. သွားခဲ့ပါသတဲ့။ “ဒီဆိုင်ဟာဆေးကုသတဲ့နေရာဟာမဟုတ်ပါဘူး။ ခင်ဗျားရဲ. အရှိတရားကို ကျွန်တော် တို. မပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါဘူး။ ၀မ်းနည်းပါတယ်” ဆိုတဲ့ စကားကိုသာရရှိခဲ့တယ်လို. ခါးကုန်းနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်က ပြန်ပြောပါတယ်။
တစ်ခါကလည်းလူသတ်ပြီးထွက်ပြေးနေတဲ့ ၀ရမ်းပြေးတစ်ယောက်ဟာ မှတ်ဥာဏ်ဆိုင်ထဲကိုသွားပြီး သူလူသတ်ခဲ့တာကို မေ့ပျောက် နိုင်စေဖို.သွားရောက်အပ်နှံပါတယ်။ “ဒီနေရာဟာ ၀ရမ်းပြေးတွေအတွက် ဖွင့်ထားတဲ့နေရာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ် ကျူးလွန်တဲ့ အမှုအတွက် ကိုယ်ပြန်ပေးဆပ်ရမှာပါ” လို. ဧည့်ကြိုကောင်တာကလူဟာ ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ နောက်မကြာခင်မှာပဲ အဲဒီ ၀ရမ်းပြေးကို ရဲတပ်ဖွဲ.ကဖမ်းဆီးရနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်တစ်ခါမှာလည်းနာကျဉ်းမှုတွေ အပြည့်နဲ.လူတစ်ယောက်ကဆိုင်ထဲကို ၀င်သွားခဲ့ပါတယ်။ “ကျွန်တော့် ဘ၀မှာ ဆိုးရွားမှု တွေနဲ. ပြည့်နှက်ခဲ့တဲ့ ၁၉၈၈ ခုနှစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖျောက်ဖျက်ချင်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ကူညီပေးပါ” ဧည့်ကြိုကောင်တာက လူဟာသူ.ကိုခုလိုပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်တဲ့။ “ဒီနေရာမှာသမိုင်းနဲ.ချီတဲ့ အဖြစ်အပျက်ကြီးတွေကိုထိန်းသိမ်းပေးလို.မရပါဘူး။ ကျွန်တော်တို.လက်ခံတာကပုဂ္ဂလိကနာကျင်၊ခက်ခဲတဲ့ သီးခြားမှတ်ဥာဏ်တွေကိုပါ။ အခြားလူတွေကိုထိခိုက်လို.မရနိုင်သလို၊ ဖျောက်ဖျက်လို.လည်းမရပါဘူး။ ၀မ်းနည်းပါတယ်”
တစ်ကြိမ်မှာတော့ မှတ်ဥာဏ်ဆိုင်ထဲကို လူတစ်ယောက်ဝင်လို.သွားခဲ့တယ်။ သူဟာတစ်နိုင်ငံလုံးကိုပတ်ပြီးခရီးသွားလာနေတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း၊သူလှည့်လည်သွားလာရင်းလူတွေငတ်မွတ်ဆင်းရဲနေတာတွေ၊ အတိဒုက္ခရောက်နေတာတွေကို မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်တွေ.လာရလို. သူ.မှာအခုဆိုရင် အိပ်မရလောက်အောင် ပြင်းထန်တဲ့အမှတ်ရမှုတွေ ဖြစ်နေတဲ့အတွက် သူ.ရဲ. ခရီးစဉ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုသူ.မှတ်ဥာဏ်ထဲကနေဖျက်ပေးပါလို. တောင်းဆိုလိုက်တယ်။ ဒီအချိန်မှာဧည့်ကြိုကောင်တာကလူဟာ နည်းနည်းတွေဝေသွားတယ်။ မျက်မှောင်ကြုံ.လို. နည်းနည်းစဉ်းစားတယ်။ ပြီးတော့ မှ ပြန်ပြောတယ်။ “ခင်ဗျားရဲ. ခရီးစဉ်ဟာ ရှည်လျားလှပြီးအဖြစ်အပျက်တွေ များလွန်းလှတာကြောင့် ခုလောလောဆယ်တော့ ကျွန်တော်တို. ဖျက်မပေးနိုင်သေးပါဘူး။ အကယ်၍ ကျွန်တော် တို. အဆင်ပြေတဲ့အခါမှာခင်ဗျားရဲ. မှတ်ဥာဏ်ကိုဖျက်ပေးနိုင်ဖို.ကြိုးစားပါ့မယ်။ ကျွန်တော်တို. ထပ်ဆက် သွယ်ပါ့မယ်” လို. ပြောပြီးဖုန်းနံပါတ်ပဲတောင်းခဲ့ပါသတဲ့။
မှတ်ဥာဏ်ဆိုင်နဲ. ပက်သက်လို. အမျိုးမျိုးစုံစမ်းကြပေမယ့် ဘယ်သူမှ တိကျရေရာစွာမသိနိုင်ကြပါဘူး။ မှတ်ဥာဏ်ဆိုင်ဟာ နေ.ခင်း၁၁ နာရီဆိုပိတ်တတ်ပေမယ့် အပြင်ကနေ ကြည့်ရင် အထဲကိုဘယ်လိုမှမမြင်နိုင်အောင် တံခါးကြီးတွေနဲ. ပိတ်ဆို. လို.ထားတယ်။ အထဲရောက်မှသာမီးထိန်ထိန်လင်းတယ်ဆိုတာကိုလူတွေသိကြတယ်။ မှတ်ဥာဏ် အပ်နှံခွင့်ရပြီး ပြန်ထွက်လာတဲ့ လူတွေဟာသူတို. အပ်နှံခဲ့တဲ့ မှတ်ဥာဏ်အကြောင်းရော၊ ဆိုင်ထဲမှာသူတို. ဘယ်လိုတွေ.ကြုံခဲ့ရတယ်ဆိုတာတွေကောဘယ်လိုမှ မမှတ်မိကြဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို.အားလုံးဟာပျော်ရွှင်လို.နေကြတယ်။အရိုးလိုစူးနေတဲ့ မှတ်ဥာဏ်ဆိုးကိုသူတို. ဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့ ကြတယ်။ ဒီတစ်ချက်နဲ.တင် သူတို.ကျေနပ်ကြတယ်။ တစ်နေကုန်တစ်နေခမ်းမှတ်ဥာဏ်ဆိုင်ကိုအပြင်ကနေစောင့်ကြည့်သူတွေ ဟာမှတ်ဥာဏ်ဆိုင်ထဲကဧည့်ကြိုကောင်တာက လူအပါအ၀င်၊တစ်စုံတစ်ယောက်မှ ထွက်လာတာကိုမမြင်ကြရဘူး။ သူတို.တွေသာ စောင့်ဆိုင်းရင်းအချိန်ကုန်လူပန်းသွားကြတယ်။ လူမှုဗေဒပညာရှင်တွေကလည်းဒီအချက်နဲ.ပက်သက်လို. အကြိတ်အနယ် အငြင်း အခုန်လုပ်ကြတယ်။ မထောက်ခံသူတွေကဒါဟာလူသားဖြစ်တည်မှုကို အနှစ်သာရကင်းမဲ့စေတဲ့လုပ်လို. ဆိုကြသလို၊ ထောက်ခံသူ တွေကတော့ ဒါဟာလူသားလွတ်လပ်ခွင့်အတွက် တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းနဲ.ဆိုင်တဲ့အရာလို.ပြန်ပြောကြတယ်။
ကဲ… မိတ်ဆွေ သင့်ပါတ်ဝန်းကျင်မှာ ဒီလိုမှတ်ဥာဏ်ဆိုင်လို. အလွယ်ခေါ်နိုင်တဲ့ မှတ်ဥာဏ်ထိန်းသိမ်းရေး ဋ္ဌာနတစ်ခုလာဖွင့်ရင် သင့်အနေနဲ. လက်ခံနိုင်ပါ့မလား။ လက်ခံနိုင် ဘာ့ကြောင့် လက်ခံတာလဲ။ လက်မခံနိုင်ရင် ဘာ့ကြောင့်လက်မခံနိုင်တာလဲ မဆိုစလောက် အချိန်ကလေးယူပြီးစဉ်းစားပေးနိုင်မလား။